आँपको बोक्रालाई नठान्नुहोस् बेकार, चाउरी कम गर्नेदेखि डण्डीफोर हटाउन प्रयोग गर्ने तरिका सहित - Mitho Khabar
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on आँपको बोक्रालाई नठान्नुहोस् बेकार, चाउरी कम गर्नेदेखि डण्डीफोर हटाउन प्रयोग गर्ने तरिका सहित
फलफूलको राजा भनेर आँपलाई भन्ने गरिन्छ । कति त आँप खान पाइन्छ भनेर नै गर्मी महिनाको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । आँप खानमा स्वादिलो हुनुका साथै यो शरीरका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले गर्मीको दिनमा शरीरलाई चिसो राख्ने गर्छ । धेरैले आँपको बोक्रालाई बेकारको ठानेर डस्टबीनमा फ्याँक्ने गर्छन् ।
तर यसले तपाईंका विभिन्न समस्या टाढा राख्ने गर्छ भन्ने थाहा छ ? आँपको बोक्रा स्वस्थ र पौष्टिक गुणले भरिएको हुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्य र सौन्दर्यसँग जोडिएका थुप्रै समस्या टाढा राख्ने गर्छ । आँपको बोक्रा स्वस्थ र पौष्टिक गुणले भरपुर हुन्छ । यसका फाइदाबारे जानकारी लिऔं ।
आँपको बोक्रामा छालालाई सफा गर्ने गुण हुन्छ । यसले समयअगावै देखिने चाउरीपनलाई नष्ट गर्ने गर्छ । यद्यपि, यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यसलाई रोक्न सकिँदैन तर यसलाई नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । फ्रि रेडिकल्स, वायु प्रदुषण, तनावका कारण अनुहारमा चाउरी पर्छ ।
यसबाहेक यसले कालो दाग कम गर्छ र अनुहारमा निखार ल्याउँछ । आँपको बोक्राले बनेको पेस्टलाई अनुहारमा १५ मिनेटसम्म राख्नुहोस् र पानीले धुनुहोस् । आँपको बोक्रालाई पेस्ट बनाउनका लागि यसलाई घाममा केही दिनसम्म सुकाउनुहोस् ।
आँपमा भिटामिन ए, बीसिक्स, सीका साथै फाइबर, कपर, फोलेट पाइन्छ । यद्यपि, मानिसहरु आँपको बोक्रालाई बेकार सम्झेर फ्याँक्ने गर्छन् तर यसमा भिटामिन सी, ई, पोलिफेनोल, क्यारोटिनोयड हुन्छ ।
यो गर्मीमा आफ्नो बोटबिरुवाका लागि आँपको बोक्रालाई जैविक मलको रुपमा प्रयोग गर्नुहोस् । आँप खाएपछि बोक्रालाई स–सानो टुक्रामा काट्नुहोस् र त्यसलाई एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा राख्नुहोस् । आँपको बोक्राका लापग एक गिला िपानी हाल्नुहोस् ।
ढक्कनलाई कसेर बाँध्नुहोस् र २४ घण्टाका लागि छोडिदिनुहोस् । भोलिपल्ट कन्टेनर खोल्नुहोस् र बोक्रालाई चलाउनुहोस् । त्यसपछि ढक्कन बन्द गर्नुहोस् र त्यसपछि २४ घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।
तेस्रो दिन यो पानीलाई छान्नुहोस् । यसलाई एक गिलास पानी हालेर पातलो बनाउनुहोस् । यो मिश्रण आफ्नो बोटबिरुवालाई दिनुहोस् । राम्रो नतिजा पाउनका लागि हप्तामा एक वा दुईपटक दोहोराउनुहोस् ।
सम्पुर्ण घरसहित जग्गा जमिन नै सकियो अहिले बाटोमा मागेर खादै ,बुवा-आमा धरधरि रोए (हेर्नुस् भिडियो )
२०७८ असार १४ गते सोमबार, ई.सं. २०२१ जुन २८ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
सुर्खेतमा ४० हजार बालबालिकालाई दादुरा र रुबेलाकोे खोप दिइने